အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: အထူး သတင်းကြေငြာချက်
အင်ဒိုနီးရှား.... မလေးရှား.... ခရိုယေးရှား..... စသော နိုင်ငံများနှယ် နိုင်ငံအမည် လေးလှစေရန်၊ တိုင်းသူပြည်သားများသာယာဝပြော အေးချမ်းစိုပြေရန်အလို့ငှာ ယမန်နေ့ နံနက် မင်္ဂလာစံတော်ချိန် နံနက် ၉ နာရီ တိတိမှာ တော်ဝင်နန်းတွင်း ပညာကဝိကြီးများ၏ အခါတော်ပေးချက်အရ ယခင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် ကြီးအား "ရေမီးရှား" နိုင်ငံတော်ကြီး ဟုပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ရန်။
Posted by တီချမ်း at 3:55 PM
Rita May 21, 2010 at 4:09 PM
မိုးခါး May 21, 2010 at 4:39 PM
Vista May 21, 2010 at 4:40 PM
ကားပြာလေး စီးချင်တာထင်တယ် .. ဗော်လဗို အပြာပြောတာပါ
အန်တီချမ်း May 21, 2010 at 4:42 PM
ဟုတ် မမရီတာ ရေ
ခုကတည်းက ဆံပင်အရှည်ထားနေပြီ ခိခိ
ပြီးတော့ အမေရိကန်ကိုလဲ အစိမ်းရောင် ကဒ်ပြားနဲ့ ခိုလှူံခွင့်လျောက်မယ် ခိခိခိ
may May 21, 2010 at 4:42 PM
တီချမ်းတို့ များ ဉာဏ်ကောင်းချက်အေ
ရီလိုက်ရတာ ဖတ်ဖတ်မော ရင်ဘတ်နောက်ကကျော
ကဲ တီချမ်း ရေ စခန်းက ခဏလောက် လိုက်ခဲ့ပါတဲ့ ငါးပိကြော် နဲ့ထမင်းကျွေးချင်လို့ တဲ့ တီချမ်းချက်ရမှာ ပင်ပန်းမစိုးလို့ တဲ့
may May 21, 2010 at 4:43 PM
အဟိ ထပ်ဖတ်ပြီး ထပ် ရီသွားတယ် အဟိ
naychi May 21, 2010 at 4:50 PM
ခွိ.. ရေမီးရှား နိုင်ငံ အရမ်းပူ မြို့သူပါရှန့်
အန်တီချမ်း May 21, 2010 at 4:51 PM
ဖိုးစိန် May 21, 2010 at 5:20 PM
သတင်းနားထောင်ဖို့ ရေဒီယို ကို ဟိုလှည့် ဒီလှည့် လိုင်းက မမိဘူးလေ...
ရန်ကုန်ကနေ သတင်းနားထောင်နေရတာ ဆိုတော့ကာ..
Helen May 21, 2010 at 10:22 PM
Nice, Great post :-))
အန်တီချမ်း May 21, 2010 at 11:00 PM
Comment by pao pao ( lord O ) 51 minutes ago Delete Comment အေး ..နော် .. တီ့ကို .. ပြော လိုက် ဦး မယ် .. နဲ နဲ ..ညိ နေ သ လား လို့..။ . Comment by pao pao ( lord O ) 53 minutes ago Delete Comment အော် ..စာ ရေးတဲ့မမ တွေ ၇ဲ့ .. နာ မည် ကို ပြောပြ တာ ပါ ..။ . Comment by Prince of Supernova3hours ago Delete Comment မမပေါင်။ နေရာများမှားနေလားလို့နော်။ ဒါက အဖွဲ့နံမယ်ကြေငြာချက်ဟုတ်ဘူးလေ။ . Comment by pao pao ( lord O )3hours ago Delete Comment အော် .. ၃ ယောက် လုံး .. မျက် နှာ သစ် လေး တွေ ဆို တော့.. ဒီ အ ဖွဲ့ကို အား ပေး ကြ မှာ ပါ ..။ ဟိဟိ..မွှေပေါ့ ..။ . Comment by Nay Yaung Lin Khant5hours ago Delete Comment ကောင်းလိုက်တဲ့ နာမည်လေးတွေဗျာ...
တေဇာ (လရောင်လမ်း) May 22, 2010 at 3:21 PM
တီချမ်းရေ..ဘာဖြစ်ဖြစ်အားပေးနေတယ်သိလား..စိတ်ကို ပျော်အောင်နေပြီး သူများကို ပျော်အောင်ထားတာကလည်း ကုသိုလ်တစ်ပါးပဲ..
ဒါပေမယ့် အချစ်အတွက်ခံစားစရာရှိခဲ့ရင် အရမ်းမခံစားနဲ့နော်..
အဲလိုလူတွေက အချစ်အတွက် အရမ်းခံစားတတ်ဆိုတာ သိတယ်..ကျမမှာလည်း တီချမ်းလို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်..အမြဲတမ်း ကျမတို့ကို ပျော်အောင်ထားတယ်..ယောကျာင်္းနဲ့စကားများတဲ့အခါ အိမ်ထောင် တာဝန်တွေပင်ပန်းတဲ့အခါတိုင်း သူကလေ စိတ်ပျော်အောင်ပေါက်ကရတွေလိုက်ပြောတယ်..သူ့ကို အရမ်းခင်ပြီး သူမ အသည်းကွဲတိုင်းလည်း ပြန်ပျော်အောင်ထားလိုက်တယ်..ဟိဟိ